‘ट्रिपल स्टिङ अपरेसन’मा परेका थिए पाठक - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपालखबर फागुन ५
आयोगले सार्वजनिक पद धारणा गरेका सयौं व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्न अहिलेसम्म स्टिङ अपरेसन उपयोग गर्दै आएको छ।
आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि दिनरात खटिने अख्तियार कर्मचारीको त्यो अनुसन्धान सीप तिखार्न थाइल्यान्ड सरकारले तालिम समेत दिन्छ।
स्टिङ अपरेसनका लागि फिल्डमा खटिने अनुसन्धान अधिकृतलाई सम्बन्धित निकाय हेर्ने आयुक्तको निर्देशन जरूरी हुन्छ। त्यस्तो निर्देशन प्रमुख आयुक्तले सदर गरेपछि मात्र टोली परिचालन हुने हो।
रोचक पक्ष के छ भने अख्तियारमा स्टिङ अपरेसन निर्देशन दिने आयुक्त राजनारायण पाठक आफैँ स्टिङ अपरेसन शिकार भए। घुस लिने आयुक्त पाठकविरुद्ध महाअभियोग तयारी भएपछि शुक्रबार उनले राजीनामा दिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेर घूस खाने पाठकविरुद्ध थप छानवीन र कारवाही हुनुपर्ने माग चुलिएको छ।
आयुक्त स्वयंले घूस लिएको यो प्रकरणको अर्को पाटो पनि छ। यस्तो स्टिङ अपरेसनको उद्देश्य के थियो? किन स्टिङ गरियो? समयक्रमसँगै यो प्रश्नको जवाफ उदांगो होला। त्यसका लागि नेपालखबरको थप खोज जारी छ। यो रिपोर्टले ‘स्टिङ अपरेसन’ कसरी भएको थियो? अख्तियार आयुक्त कसरी भिडियो क्यामेरा लेन्स अगाडि परे? त्यो उपकरण काठमाडौंमै खरिद गरिएको थियो वा विदेशबाट मगाइएको थियो? भन्ने खुलस्त पार्ने प्रयास गरेको छ।
चाँगुनारायण, भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद यो स्टिङ अपरेसनको पृष्ठभूमि हो।
अख्तियार आयुक्तले घुस लिएको प्रकरण २०७४ वैशाख २५ मा सुरु हुन्छ। सो मितिमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भयो। २५ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको सो कलेज सामाजिक संघसंस्था ऐन अन्तर्गत सञ्चालित हो। कलेज सञ्चालक समिति अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने त्यसको स्वामित्व परिवर्तन गरी निजी बनाउन चाहन्थे। सोही उद्देश्यले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि दर्ता गरे। तर ७ सदस्यीय कलेज सञ्चालक समितिमा प्राडा दीपक भट्टराईसहित ३ जना यो निर्णयको विपक्षमा उँभिए। उनीहरु निवेदन लिएर अख्तियार पुगे। अख्तियारमा शिक्षा क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने जिम्मेवारी आयुक्त पाठकको थियो।
पहिलो रेकर्डिङ मोबाइलबाट
आफूविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थाहा पाएका न्यौपाने मुद्दा सेटिङ गर्न चाहन्थे। उनले आफ्नो उद्देश्य एक जना तराईबासी मित्रलाई सुनाए जसको हिमचिम आयुक्त पाठकसँग थियो। पाठक तराईबासी हुन्। उनको पुरानो घर महोत्तरी हो।
‘केस मिलाइदिन्छु १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाग्छ’, जोगिन्दर झा (नाम परिवर्तन)ले अध्यक्ष न्यौपानेलाई भनेको उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘२०७४ भदौमा दुई चरणमा ४० र ३८ लाख रुपैयाँ दिइएको हो। एक पटक कार्यालयमा भेटेपछि लेनादेनाका सबै डिल शान्तिनगरस्थित उनकै घरमा भएका हुन्।’
आयुक्त पाठकलाई पैसा बुझाइसकेकाले स्वामित्व परिवर्तनमा अख्तियार दाहिना भइसकेकोमा न्यौपाने ढुक्क थिए। तर अख्तियारले निवेदन तामेलीमा राखेन। बरु अझै रकम बार्गेनिङ गर्दै पाठकले फाइल अघि बढाउन सक्ने संकेत गरे। यसले न्यौपानालाई झस्कायो। उनी झासहितको समूहसँग बिच्किए। आयुक्त पाठकसँगको सेटिङ परिपक्व पार्न दवाब दिए।
दुई तिरको चेपुवामा परेका झाले यो मुद्दा आफ्ना घनिष्ठ मित्र एवं मार्सल आर्टका एक खेलाडी सनम मोक्तान (नाम परिवर्तन) कहाँ पुर्याए। हकी स्वभावका मोक्तानले तथ्य प्रमाण हेर्न चाहे। झाले पाठकसँग पैसा लेनदेन गर्दा भएका सम्वादको केही अडियो रेकर्ड गरेका थिए। त्यो नै यो प्रकरणको पहिलो तहको स्टिङ अपरेसन हो। त्यसबाट धेरै कुरा खुल्दैनथ्यो। सन्दर्भ र पृष्ठभूमि जोड्दा मात्र पाठकले रकम बुझेको अर्थ लाग्थ्यो।
प्रमुख आयुक्त बनेपछि कमाउने सपना
दोस्रो स्टिङ अपरेसन यही अडियोका आधारमा सुरु हुन्छ। त्यो जाडो मौसम थियो। कालो ओभरकोट लगाएका मोक्तान सिधै टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय पुगे। गेटमा वास्तविक नाम लेखाए। त्यहाँ उनको परिचय शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक व्यक्तिको रूपमा भयो। त्यसपछि उनी पाठकको कार्यकक्ष पुगे। यो २०७४ माघ १४ को दिनको घटना हो। पाठक त्यतिबेला शिक्षा क्षेत्रका अनियमितता हेर्ने भूमिकामा थिए।
मोक्तानको साथमा एउटा विशेष क्यामेरा थियो। जसले फोटो, भिडियो, अडियो एकै पटक छनाैटअनुसार खिच्न सक्थ्यो। यो क्यामेराले टाढाको मसिनो आवाज समेत रेकर्ड गर्न सक्थ्यो। त्यस्तो अत्याधुनिक सुराकी क्यामेरा काठमाडौंका इलेक्ट्रिोनिक्स पसलमा पाइँदैन। उनले यो जापानबाट मगाएका थिए।
आयुक्त पाठक सुरुमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद थाहा नभएको, पैसा दिने झालाई नचिनेको भन्दै पन्छिए। सनम मोक्तानलाई बेवास्ता गरे। २०७४ माघ १४ देखि ‘इग्नोर’ गर्ने यो क्रम करिब एक महिनासम्म चल्यो। अन्तिम अस्त्र स्वरुप मोक्तानले जब झासँगको लेनदेन अडियो सुनाए त्यसपछि पाठक छागाबाट खसे झैँ भए। प्रकरणले १८० डिग्रीको फन्को मार्यो।
अब उनले मोक्तानलाई घरमै बोलाउन थाले। खुलस्त कुरा गर्न सुरु गरे। कुराकानीमा निर्धक्कसँग ७८ लाख घूस लिएको विषय स्वीकारे। घूसको पैसाले तनाब बढाएको, श्रीमतीले गाली गरेको, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएको एवं प्रमुख आयुक्त हुने धोको पुरा नहुने खतरा बढाएको उनी बताउँथे। यो बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको उनले सेयर गरे।
यी सबै स्वीकारोक्ति क्यामेरा अगाडि भएका हुन्। ती सबै रेकर्ड भएका छन्। भिडियोमा घूस लिएको स्वीकारे पनि पैसा फिर्ता गर्न उनी कहीँ समत देखिँदैनन्। जुन मोक्तान चाहन्थे। बरु उनले आवश्वसन दिएका छन्, ‘प्रमुख आयुक्त बनेपछि म पनि कमाउँछु तपाइँ पनि करोडौं कमाउनु होला।’
उनी फेरि छागाबाट खसेजस्तो भए
पैसा फिर्ता माग्ने र झुलाउने क्रम महिनौंसम्म चल्यो। पाठकको ज्याद्रोपनसँग मोक्तानको केही लागेन।
२०७५ वैशाख महिनाको एक दिन उनी शान्तिनगर, बाबुछिरि शेर्पा चोकस्थित पाठक निवास पुगे। त्यतिबेलासम्म मोक्तानका लागि पाठक निवास जानु, पेय पदार्थ पिउनु सामान्य भइसकेको थियो। त्यो दिन स्थिति केही फरक भयो। मोक्तानको साथमा एउटा सानो ब्याग थियो। उनले ब्यागबाट ल्यापटप झिके। भिडियो फुटेज प्ले गरे। भिडियो हेरेका पाठक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज घूस प्रकरणमा दोस्रो पटक छागाबाट खसेजस्तो भए।
भिडियोमा पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको स्वीकारोक्ति थियो। ती फुटेज पाठक आफैँले प्ले गरेर समेत हेरे। खुफिया क्यामेराबाट त्यो रेकर्ड सम्भव भएको थियो। उनले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको, धोका दिएको भन्दै आक्रोश पोखे।
रोमाञ्चक त यो थियो कि घूस लिएको स्वीकार फुटेज अख्तियार आयुक्त पाठकले हेरिरकाे दृश्य, उनको आक्रोश सबै अर्को भिडियोमा रेकर्ड भइरहे। अर्थात् पाठक तेस्रो तहको स्टिङ अपरेसनमा परिरहेका थिए।
प्रकाशित ५ फागुन २०७५, आइतबार | 2019-02-17 15:14:54